I-Psychology ye-typography: yintoni na, indlela evezwa ngayo kunye neempawu zayo | Abadali be-Intanethi
Umthombo: Intengiso ngqo
Kwilizwe loyilo, sijikelezwe zizo zombini iimvakalelo kunye nentetho. Kukho iimpawu ezininzi ezizimeleyo kunye neenjongo ezinokuthi umfanekiso uzidlulisele kuthi. Yingakho, kungekhona imibala kuphela ekwaziyo ukusixelela ngohlobo lwekhowudi ukuba luhlobo luni lobuntu abanalo okanye umlingiswa abawunikelayo kumfanekiso wangaphandle.
Kukwakho nezinye izinto ezinje ngeefonti, ezikwaziyo ukudlulisa iimvakalelo ezahlukeneyo kunye nokudlala indima eyimfuneko, kumyili kunye nombukeli ojonga iprojekthi. Kule posi siza kuthetha nawe malunga nendlela iifonti eziphembelela ngayo umlinganiswa yeprojekthi ethile kunye nendlela abanoxanduva lokwenza abaphulaphuli bethu bazive ngendlela esifuna bazive ngayo, kwaye oku kubizwa ngokuba yi-psychology ye-typography.
1 Yintoni ipsychology yokuchwetheza?
2 Intsingiselo yefonti nganye
2.3 Ibhalwe ngesandla
2.4 ifantasy okanye ukuhlobisa
3 Ezona ntlobo zochwethezo
Yintoni ipsychology yokuchwetheza?
Ipsychology yokuchwetheza Kuqondwa njengophononongo lweentsapho ezahlukeneyo zokuchwetheza kunye nendlela eziboniswa ngayo kwicandelo loyilo lwegraphic. Impembelelo yabo inkulu kangangokuba banokudlulisela iimvakalelo neengcinga ezahlukeneyo kwabo bazibonayo nakwabo baziyilileyo.
Kwiikhankaso ezininzi zentengiso, i-typography isoloko idlala indima ebaluleke kakhulu ekuphuhlisweni kwayo. Ewe, inokuba yinto ephambili yesihloko esikhulu esishwankathela wonke umyalezo wephulo. Amaphulo amaninzi akhethe ukusebenzisa i-typography kuphela njengento ephambili, kwaye oku akumangalisi, kuba sinokudlala nabo ngeendlela ezininzi kwaye. ngokuzibandakanya nje, umbukeli uya kuba esazi kuqala ukuba zeziphi iimvakalelo esithetha ngazo.
Kukho iimveliso ezininzi okanye izinto apho lo vimba usetyenziswa, kodwa amaphulo amaninzi abhenela iziphuzo ezithambileyo okanye amatyathanga okutya okukhawulezayo. Ziinketho ezilungileyo zokusebenzisa olu hlobo lweefonti, ngoko kunokuba nomdla.
Banceda umbukeli ukuba angaphulukani nomsonto weprojekthi ayijongileyo. Oko kukuthi, ulawula ukufezekisa uhlobo lomgca kunye nekhonkco leemvakalelo kunye neemvakalelo ezimbeka kwindawo echanekileyo kunye nechanekileyo.
Yinto ekhoyo kakhulu kwicandelo lesazisi senkampani. Xa siyila uphawu, kubalulekile ukwazi ukuba zeziphi ii-typefaces eziya kuba yinxalenye yophawu lwethu, kuba baya kuqonda isiqingatha okanye bonke abalinganiswa kunye nendlela inkampani yethu eya kuthi iqondiswe kwaye iboniswe ngayo kuluntu lwethu.
isayikholoji kwi-typography, Yinto ekwabandakanyeka kakhulu kwimihla yethu. Nanini na xa sijonga okusingqongileyo, siqaphela iindidi ezininzi zamashishini akhethe le nto njengeyona nto iphambili kumfanekiso wabo.
Kwakhona kunceda ukufuna ukuthetha yonke into ngento, oko kukuthi, ngokukhetha ifonti echanekileyo emva kokuyihlalutya, sifikelela kwisigqibo sokuba singakwazi ukuthetha yonke into ngokuncinci. Bubugqi bokubhala komntu.
Ngamafutshane, zininzi iimpawu ezidibanisa ipsychology yokuchwetheza.
Intsingiselo yefonti nganye
ISerif yokuchwetheza Ibonakala ngokuba yeyona nto indala yokuchwetheza. Kwaye akungenxa yokuba ngulowo wazalwa ngaphambili, kodwa kwakhona. Ukuba akunjalo ngenxa yokuba lusapho lokuqala olwayilwa kwaye lwadalwa. Intsingiselo yawo isusela emva ngokukodwa kumaxesha amaRoma. Ixesha apho kwakusetyenziswa amatye kunye nombhalo ngamnye ukroliwe. Ngesi sizathu, sinokuxabisa iifowuthi eziphawulwe kakhulu eziqulathwe zezi fonti.
Olu hlobo lochwethezo lusoloko lusetyenziswa ngakumbi kwimibhalo emide, ngenxa yobume bayo. Idla ngokuba nenkangeleko yakudala ebabonakalisa kakhulu kwaye iveza amabinzana neemvakalelo ezinjengobunzulu. Ngaphandle kwamathandabuzo zezinye zezona ntlobo zochwethezo zisesikweni ezikhoyo. Ngokuqhelekileyo badla ngokuyisebenzisa kwiimveliso ezityebileyo ngenxa yexabiso labo, ezifana neziqholo, iitshokholethi okanye ubucwebe.
Umthombo: Daily Report
Iifonti zeSans serif luhlobo lwefonti, ngokungafaniyo neefonti zeserif, ezingenazo iiserif emzimbeni wazo. Ukungabikho kwee-serif kuthetha ukuba ezi ntlobo zochwethezo zitshintsha inkangeleko yazo kwaye zithathelwa ingqalelo kwaye zifakwe kwikhathalogu njengezona ntlobo zochwethezo zangoku ngokugqwesileyo.
Ngokungafaniyo ne-serif, i-sans serifs zidla ngokusetyenziswa kwizicatshulwa ezinkulu, ngale ndlela bagubungela itotali yemibhalo engezantsi kunye nezihloko zephepha ezidibanisa ngokugqibeleleyo. Baziveza ngesitayile esincinci, esingekho nzulu kangako kodwa sigcina ubusesikweni kunye nobungcali.
Umthombo: Ingcamango yokuYila
Iifonti ezibhalwe ngesandla zezo ziphawulwa ngokuyilwa ngesandla. Ngokungafaniyo nezinye, ezinokuthi ziyilwe ngokwedijithali, ezi zigcina uyilo lwakudala. Zintle kakhulu ukuzibona kodwa ngamanye amaxesha, kunzima kakhulu ukuzifunda. Yiyo loo nto zingamagama ayilelwe ukuba ahlengahlengiswe njengezihloko eziphambili kwaye hayi ukuqhutywa kweetekisi.
Inkangeleko yayo ithetha ukuba ithathwa njengenye yohlobo lochwethezo olunomoya okumgangatho ophezulu kunye nombaxa. Ukongeza, ziye zasetyenziswa ngamacandelo ahlukeneyo ngenxa yenkangeleko enzulu kunye nesesikweni. Umzekelo obalaseleyo ngokungathandabuzekiyo iyakuba licandelo lewayini okanye lesiqholo. Nditsho netshokholethi ezinexabiso eliphezulu zikhethe ukusebenzisa olu hlobo lweefonti kwiilogo zazo. ukubiza enye yeemveliso zabo.
Ngamafutshane, luhlobo olugqibeleleyo lwefonti ukubabandakanya kwezona projekthi zakho zobuchwephesha kunye nezinzulu.
ifantasy okanye ukuhlobisa
Ezi ntlobo zochwethezo ziphawulwa ngokwemilo yazo, zibonisa ezomntu kakhulu kunye neefom zoyilo, ezibekwe kumabali eDisney, kungoko ilogo yeDisney iyilwe ngohlobo lokuhombisa. Ngokuqhelekileyo luhlobo lochwethezo olunowona mlinganiso wokudala kunye nobugcisa, kuba ayenzelwanga isicatshulwa esincinci esisebenzayo kodwa izihloko ezinkulu.
Iibrendi ezininzi nazo zikhethe kolu yilo lwefonti, kwaye ayimangalisi, kuba ziyila kakhulu, zikholisa ukutsala ingqwalasela enkulu kwaye umbukeli udla ngokuzikhumbula ngokulula kakhulu. Ngamafutshane, lukhetho olugqibeleleyo ukuba ujonge into edlamkileyo.
Ezona ntlobo zochwethezo
I-Bodoni typeface ifakwe kwikhathalogu njengenye yeefonti zeserif ezisetyenziswa kakhulu ngabayili kunye nabayili abavela kwihlabathi liphela. Ukuthandwa kwayo kuye kwafikelela kwiintlobo ezininzi zokusetyenziswa kangangokuba akuqhelekanga ukuyibona kwezinye zezona ndawo zibalaseleyo, kwiimenyu zokutyela okanye kwiimpawu zokutya.
Ngokungathandabuzekiyo yenye yohlobo lochwethezo lweserif ukuba ungafaka isicelo ukuba ujonge izinto ezinzulu kunye nedemure. Ubume bayo beklasikhi kunye ne-demure iyenza ibe yenye yezona zinto zinobunewunewu kunye nohlobo olunomtsalane, kunye nokugqibelela.
I-Futura yinkwenkwezi yokuchwetheza ye-80% yabayili abasebenzela iibrendi okanye uyilo lokuhlela. Umyili wayo uPaul Renner, omnye wabayili bemizobo ebaluleke kakhulu kwimbali nakwihlabathi liphela. Olu hlobo lochwethezo lufakwe kwikhathalogu njengohlobo lwe-sans serif, olubonakala luphawulwa yimivumbo eqhelekileyo nelula yejometri, kunye ne-linear stroke egqibeleleyo abanayo. Ludidi olugqibeleleyo lochwethezo kulo naluphi na uhlobo lokubhaliweyo, nokuba yintloko, itekisi ebalekayo okanye isihloko.
Ukongeza, iimveliso ezininzi ziye zajoyina olu hlobo lokubhala olunenkangeleko encinci kakhulu kwaye yangoku, eqhelekileyo yelo xesha.
Wonke umntu ozinikele ekuyilweni kufuneka azi le typography ngokuqinisekileyo. Yaphuhliswa ngumyili, uMax Miedinger ngonyaka ka-1957 kwaye igama lakhe livelisa umntu obhinqileyo ukusuka kwixesha lakudala lamazwe afana neSwitzerland.
Akunakulindeleka ukuba le ndoda iyile enye yezona ntlobo zimelayo zoyilo lwegraphic, ngokubanzi kwimbali yoyilo lwegraphic. Yintoni ebonakalisa olu hlobo lochwethezo kakhulu yimilo yayo, iphinda ibonise iimilo zejometri ezenza zibe nomdla ngakumbi. Ngokuqinisekileyo lukhetho olugqibeleleyo.
Olokugqibela kokhetho lwethu ngokungathandabuzekiyo luphawu lohlobo lweRockwell, olu hlobo lochwethezo lwenzelwe iintloko kuphela. Kwaye akumangalisi ukuba simbone kwezinye zeepowusta zemuvi zibalaseleyo, ekubeni ipowusta yebhanyabhanya yembethi manqindi iRocky, ibhalwe kumxholo wemovie yakhe.
Ngokungathandabuzekiyo luchwethezo olubonisa ukomelela kunye namandla, kwaye inkangeleko yayo engqindilili iyenza ibonakale kumgama oziikhilomitha, ngoko ingena ngoko nangoko kwindawo yokubona yombukeli. Ngaphandle kwamathandabuzo lolona chwethezo lufanelekileyo lwezihloko zakho, kunye nohlobo olufanelekileyo lokuchwetheza nalo ukutsala umdla.
Ipsychology yokuchwetheza sisifundo namhlanje esisebenza njengesiseko sokuqala sokuqonda ukusetyenziswa kunye nenjongo yayo. Yiyo loo nto kubalulekile ukwazi kunye nokwazi i-typography yethu ngokupheleleyo. Nanini na xa uza kuyila ibhrendi, hlalutya i-typography yakho kuqala, hayi kuphela ezo uza kuzikhetha, kodwa ezinye onazo njengemizobo.
Ngamafutshane, luphononongo oluye lwanceda abayili abaninzi abavela kwihlabathi liphela ukuba bazi kwaye bafunde ngakumbi malunga nehlabathi lokuchwetheza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » isayikholoji yokuchwetheza